Chairo huni pasi ndiyo yekugadzirisa mushure mekucheka chaiko nehunhu huni uye ikave, yakachengetedza iyo yekushongedza pateni ine yakanaka yakasikwa solid solid uye dhizaini zvachose, nekuti haina kushandisa namira mumiriri kuenzanisa kuchengetedza kwezvakatipoteredza kazhinji kudaro. Chaiyo huni pasi panoda kuisa keel w ...
Hunhu hwePSC hwakanyorwa-kunyanya hunhu hwayo husina mvura-ndiwo makiyi ekutengesa emaRSA. Inoratidzwa iAxiscor's Pro12. Chikamu cheLVT, chakasimba pakukura chinorema hitter, chakaona kumwe kuchinja kukuru kuchiitika mu2019. Kubva pakuderera kwe ...
Floor kufukidza nhau
Mukati mechikamu cheLVT, SPC uye WPC inoenderera mberi kutyaira kutengesa. Kufananidzirwa iDistinction Plus kubva kuShaw Floors 'Floorté muunganidzwa. Iyo isinga pinde mvura inodzora flooring chikamu yakaenderera nekukwira kwayo kwemeteoriki mu2019, uye hapana kwazviri izvo zvimwe ...